Dowladda Puntland oo maanta tobabar ciidan ufurtay 28 askari oo loogu talagay xabsiga dhexe ee degmada Qardho. – Radio Daljir
Seteembar 23, 2012 9:08 b 0
Garowe, Sept, 23 – Waxaa maanta kulliyada tobabarka macalimiinta ee GETEC Garowe ka furmay wajigii koowaad tababar loo qabtay? 28 askari oo loo carbinayo in ay ka howlgalaan xabisga dhexe ee degmada Qardho oo dhawaan la dhamystiray dhismihiisiisa.
Furitaanta tobabarkaasi waxaa ka qeyb galay xubno uu horkacayay wasiirka cadaaladda diinta iyo Aw-qaafta Puntland C/khaliif Shiikh Xassan Ajaayo, taliyaha ciidanka asluubta Puntland Sareeyo guuto Cali Nuur Cumar , ku xigeenkiisa G/sare C/laahi Cismaan Liibaan iyo lataliyayaal ka socday Hay’dda UNDP oo iyadu maal-galisay tababarkani.
Muddada tobabarkaan uu soconayo oo ku siman 7? cisho, ayaa ciidamada waxaa la bari-doonaa tobabaro la xiriira sharuucda iyo habka loola dhaqmayo maxaabiista lagusoo xiro xabsiga dhexe ee degmada Qarsho oo ah markii ugu horeysay ee degmadaasi laga hirgaliyo jeel lagu haynayo dadka dambiilayaasha ee la xukumo ama lagusoo qabtay fal dambiyeedyo waaweyn.
Taliyaha ciidanka Asluubta Puntland Sareeyo guuuto Cali Nuur Cumar ayaa sheegay in ciidamadaan ay ka filayaan kuwo lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya danaha ummadda reer Puntland, Waxaana ciidamada loo furay tobaarkaan uu taliyuhu sheegay in ay ku jiraan kuwa horey tobabar uguusoo qaatay xabsiga Qardho iyo qaar kaloo kamid ahaa ciidamadii Qardho.
Wasiirka cadaaladda, Diinta iyo dhaqan celinta Puntland C/ Qaliif Sheikh Xasan ‘Ajaayo’ oo dhiniciisa kahadlay tobabarka ciidmadaan ayaa sheegay in xukuumada haatan jirta ay ku dadaashay in ay xabsi weyn ka hirgaliso degmada Qardho ee gobolka Karkaar oo aanan horey ulahaan jirin xabsi, Waxaana wasiirka cadaaladda uu sidoo kale sheegay in ay haatan wajiga 2aad ee tobabarkaan oo isaguna loo qabanayo isla ciidamo ka socda degmada Qradho.socdaan dhismaha xabsiyo kale oo qaarkood haatan lagawado duleedyada magalaada Garowe.
Ciidamada tobabarkaan loo furay ayaa la qorsheynayaa in todobaad kadib dib loogu celiyo degmada qardho halkaasi oo ay kaga howl gali doonaan xabsi dhexe ee Qradho, Waxaana kadib furmaya
C/Weli Maxamed Shiikh